Krakow - nlegharị anya nleta
Krakow bụ obere obodo oge ochie, a ghọtara na ọ bụ naanị na Poland, ma na Europe. Ọ na-ejikọta ihe dịgasị iche iche na ọdịbendị dị iche iche, na ọdịdị nke oge a nwere obodo ise, jikọtara ọnụ. Akụkọ ihe mere eme emeso Krakow amara, ya mere a na-enye ọtụtụ ebe nlegharị anya na ọnọdụ na-adịghị mma ma na-eku ume na oge ezumike. Ndepụta nke ihe bara uru ịhụ na Krakow nwere ike ibu nnukwu, ebe ọ bụ na ụlọ ọ bụla dị n'obodo a bụ akụkọ ihe mere eme, omenala, ma ọ bụ omenala, ka anyị kwụsịrị na ndị a ma ama.
Krakow - ụlọ eze na Wawel
E wuru Wawel Castle dị na Krakow na narị afọ nke iri na anọ n'oge ọchịchị Casimir Ukwu ahụ. Ma n'afọ 1499, ọ tara ọkụ nke ukwuu na ọ bụ naanị Chicken Paw Tower mere ka ọ ghara ịnwụ. N'ebe a, Eze Alexander kpebiri iwughachi ụlọ ahụ. Ihe si na ya pụta bụ nnukwu ụlọ ndị eze na omenala ndị kachasị mma nke Italian Renaissance, nke ụlọ ndị eze na ụlọ okpukpe. Onye a ma ama n'ime ha bụ ụlọ ụka nke Zygmund, nke na-etinye nnukwu mgbịrịgba otu aha.
Nakwa n'ókèala bụ òtù nzuzo Kathedral nke Saints Wenceslas na Stanislaus. Ọ na-arụ ili nke ndị ọchịchị Polish na ebe a ma ama nke Ala Nne - ebe ndị mọnk na-etinye trophies agha ha.
Krakow: ebe nkiri - Market Square
Ebe a na-ere ahịa na Krakow, tinyere Venetian San Marco, bụ otu n'ime ogige ndị kasị buru ibu na Europe. E guzobere ya na 1257, ụlọ ndị dị n'akụkụ ya, nke e wuru na narị afọ nke iri na anọ, nwetara ọdịdị ha ugbu a ruo na 1818-XIX, ọ bụ ezie na ha nọgidere na-enwe atụmatụ mbụ nke ụlọ ọrụ Baroque na Renaissance.
Otu n'ime ọtụtụ ebe nkiri nke square bụ ụlọ ahịa nke Ụlọ Nzukọ ahụ, nke e wuru na 1358 ma meeghachi ya ugboro ugboro n'ọdịnihu. Ugbu a na ala mbụ, e nwere ụlọ ahịa ihe ncheta dị iche iche, ụlọ nke abụọ nke ụlọ ọrụ ndị mmadụ na-esere na eserese.
Ebe a ma ama bụ ebe dị na Krakow na nnukwu isi nke Eros, dinara na square. Ekwenyere na nwa agbọghọ ahụ rutere ya, n'ime otu afọ ga-achọta obi ụtọ ezinụlọ.
Chọọchị Mariatsky - Krakow
Gothic atọ na-nave basilica bụ isi okpukpe Katọlik nke obodo ahụ. Ụlọ nke oge a bụ nke ụlọ nke atọ, e mebiri katidral abụọ gara aga. Owuwu ya malitere na etiti narị afọ nke iri na abụọ, ma ọ bụ site na XVI ka e dechara ya. A na - ejikọta omenala obodo a na - achọsi ike - oge ọ bụla onye ụda nke na - egwuri egwu n'egwú, ọ dịghị mgbe ọ na - akpọ ụda egwu ruo mgbe ọgwụgwụ, si na ụlọ elu eletrik kpuchie ya. Ihe kpatara nke a bụ na onye bu ya ụzọ na narị afọ nke 14 hụrụ na Tatars na-abịaru obodo ahụ nso ma kpebie ịdọ aka ná ntị nke ụbọ ọkpọ na ụmụ amaala ibe ya banyere ya, mana enweghị oge iji gwuo egwu, ma ọ bụ onye iro onye iro.
Krakow - nnu nnu
Nnu nnu di n'ime obodo kacha nso na Krakow, Wieliczka, nke di kilomita iri. Ndị nchịkọta na-anọchite anya obodo nnu zuru ezu na ọkwa itoolu, akụkọ ihe mere eme ha karịrị narị afọ asaa. Echiche abụọ a na-agaghị echefu echefu bụ nke ụlọ ụka nnu abụọ - St. Kinga na St. Anton, bụ ndị a na-eji nnu mee ihe n'ime nkọwa, ruo n'elu ụlọ elu na ebe ịchụàjà.
N'afọ 1964, e mepere ebe nchekwa dị n'okpuru ebe a, ọkachamara n'ịgwọ ụkwara ume ọkụ.
Egwuregwu Mmiri - Kraków
Mmiri Park bụ nnukwu ogige mmiri na Eastern Europe. Ndị ọbịa ga-enwe ọtụtụ slides, geysers, jacuzzi, ọdọ mmiri. Ụmụaka ga-enwe mmasị site n'aka ndị ọkachamara na-ahụ maka ọdịnala n'ụdị akwụkwọ akụkọ ifo. Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, SPA-zones maka ntụrụndụ na-arụ ọrụ nke ọma bụ ụlọ ntụrụndụ na ntụrụndụ.
Dinosaur Park - Kraków
Ogige ntụrụndụ nke dinosaur bụ ebe pụrụ iche, na-enye onye njem nleta ụzọ na-aga n'okporo ọhịa "prehistoric", bụ ebe ọ ga-ezute "ndụ" ndị bi na ya, na-eme nnọọ nke ọma na oke ọganihu.
Iji gaa obodo a magburu onwe ya ị ga-achọ paspọtụ na visa Schengen .
Golden mgbanaka nke Russia - obodo
Ihe ncheta ndị dị aṅaa ka ha si n'Ijipt pụta?
Ebee ka ọ ka mma iji zuru ike na Turkey?
Ugwu kachasị elu na Russia
Kedu ihe bụ agrotourism?
Jide na mgbanwe
Ngwá ọrụ maka pumpkins maka ụlọ akwụkwọ
Bella Hadid zọpụtara site na ọdịda nke Gigi Hadid na Anna Sui show
Kedu ihe na-egbu egbu na otú ize ndụ a dịruru ize ndụ?
Ndị nna nna 8 nke na-echeghị na ụmụaka nwere ụmụaka iwu
Bizybord aka aka
Ulo oru ahia umu nwanyi
Enwunye ọkụ na mmiri maka oge okpomọkụ
Ụmụaka akpụkpọ ụkwụ n'oge mgbụsị akwụkwọ
Ejiji ntutu dị mma 2013
Nna Paris Hilton
Ero ihendori si na oyi na-acha mushrooms
Swimwear Ọ 2014
Uwe ejiji na-acha ọkụ
Ụbọchị ọmụmụ na ụdị nke "Obi Nzuzo"
Akwukwo galinated na denticles maka oyi
Kedu otu esi ekpebi afọ nke oke ugbo?